မြန်မာလူငယ်အသင်း (ယူကေ) ၏ နှစ်နှစ်ပြည့် ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်
အားလုံးသော မိဘပည်သူအပေါင်းတို့ကို မင်္ဂလာပါ လို့ ကျွန်တော်များ မြန်မာလူငယ်အသင်း - ယူကေ ( BYA-UK) မှ နုတ်ခွန်းဆက်သလိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိဘပြည်သူတို့ ရဲ့မွန်မြတ်လှသော စိတ်ထား၊ ရက်ရောလှသော သဒ္ဒါ တရားတို့ နှင့် အတူ ပြည်မြန်မာ သာယာဝပြော ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်း ကူညီမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့့ မြန်မာလူငယ် အသင်း - ယူကေ ( BYA-UK) အဖြစ်ရပ်တည်လာ တာ၂နှစ်တိုင်ခဲ့ ပါပြီ။
အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သော ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်များ BURMESE YOUTH ASSOCIATION ( BYA-UK ) မှ ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက် လျက် ရှိပါသည်။
BYA-UK မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ
၁။ ချို့ တဲ့ကလေးငယ်များအတွက် ပညာရေးစရိတ် ထောက်ပံ့မှု
၂။ ဓမ္မပါရဂူဆေးခန်းရဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အတွက် လစဉ်လှူဒါန်းမှု
၃။ မျက်စိဝေဒနာရှင်များအတွက် အသေးစားခွဲစိတ်မှု
၄။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လှသော သောက်သုံးရေအတွက် အဝီဝိတွင်း လှူဒါန်းမှု
သို့ဖြစ်ပါ၍ များပြားလှသော လိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန် အတွက် BYA-UK မှဦးဆောင်၍ Fund Raising (Buffet) ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို သူငယ်ချင်းတို့အနေဖြင့် ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝဆိုသည့်အတိုင်း လက်မှတ်တစ်ဆောင်ကို £8 နှုန်းဖြင့် ကြိုတင် ဝယ်ယူအားပေးပံ့ပိုး ကူညီပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၂။ မုန့် ဟင်းခါး
၃။ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ
၄။ ရခိုင်မုန့် တီ
၅။ ခေါက်ဆွဲ ကြော်
၁၁။ ကော်ပြန့် စိမ်း
၁၃။ ရွှေညောင်ပင် ကြက်သားသုပ်
၁၅။ မုန့် ကြာစေ့
၁၈။ ကျောက်ကျော နှင့် အတူ မြန်မာရိုးရာ ထမင်းဟင်းစုံလင်စွာ မိမိကြိုက် နှစ်သက်ရာ အစာအစာများကို စိတ်ကြိုက်စားသုံးနိုင်ပါသည်။
ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွင် .... ရွှေတံဆိပ်(၁၉)ဆုရနိုင်ငံကျော် သီရိမောင်မောင် မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့ နှင့် london ရောက် မြန်မာ လူငယ်မောင်မယ် များ၏ တေးသံသာများ၊ အကအလှ များနှင့် ကလေးကစားနည်းများ စုံလင်စွာ တင်ဆက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု့ အမှတ်တရ လက်ဆောင် များကိုလည်းရောင်းချသွား မည်ဖြစ် ပါသည်။ ( ရုပ်သေးရုပ် ၊ မြန်မာ အဝတ်အထည်များ )
Ticket တစ်စောင်ကို £8 နှုန်းဖြင့် နီးစပ်ရာ BYA-UK အဖွဲ့ ဝင်များထံတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
St Agnes Church, 35 Cricklewood Lane, London, NW2 1HR
ကိုဇာနည် ph. 07576607122
ကိုညီညီ ph. 07805434919
ကိုဗေလီ ph. 07853115086
ကိုပြည့်စုံ ph. 07908077006
ကိုအာကာမျိုး ph. 07745885770
ကိုကျော်ဇေလတ် ph. 07738179903
ကိုလျှန်ထက်ဇော် ph. 07889380910
ကိုခိုင်လင်း ph. 07848822593
ကိုစည်သူ ph. 07429817176
အမှုဆောင်အဖွဲ့ ( BYA-UK )
Via : facebook event
Burmese Events in London Burmese events in the uk
Labels: Burmese Events in London Burmese events in the uk
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လန်ဒန်ရောက် မြန်မာမိသားစုမ...
Meeting with Daw Aung San Suu Kyi and Burmese Comm...
Protest against BBC to stop announcing Bogus News ...
မြန်မာလူငယ်အသင်း (ယူကေ) ၏ နှစ်နှစ်ပြည့် ရံပုံငွေေ...
Burma's opposition leader Aung San Suu Kyi speech ...
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဒုက္ခရောက်နေသောပြည်သူများအတွက် အလှုေ...